I-Verizon Smartplay Thuthukisa Izikweletu ku-IBC 2019 - I-NAB Show News ngu-Broadcast Beat, Umsakazi Osemthethweni we-NAB Show - I-NAB BONISA I-LIVE
Ikhaya » Okufakiwe » Ukuthuthuka kwe-Verizon Smartplay Okukweletwayo ku-IBC 2019
With I-IBC 2019 sekuphelile, kubalulekile ekubhekeni izinkundla eziningi zemithombo yezindaba ezinhle kakhulu ebezikhonjelwe engqungqutheleni. Eyodwa eyavelela kakhulu ukuthi I-Verizon Media. Ku-IBC 2019, imithombo yezindaba yaseVerizon yakhokhiswa I-Verizon Smartplay, ukubuyekezwa kwakamuva kwesikhulumi semidiya yakhe.
Yini i-Verizon Smartplay?
I-Verizon Smartplay, eyaziwa nangokuthi i-Stream Routing, iyipulatifomu yeVerizon Media enikezela ngethrafikhi yevidiyo phezu kwamanethiwekhi amaningi wokulethwa kokuqukethwe (ama-CDN), okuvumela izikhathi zokuqalisa ezisheshayo kanye nokwehlisa okungasebenzi. I-Verizon Smartplay isebenzisa idatha yeseva ye-Verizon Media kanye nedatha yokusebenza kwamakhasimende kunethiwekhi yayo yomhlaba wonke kanye nokusatshalaliswa kwensimbi ukuhambisa ithrafikhi enamandla. Lokhu kungasiza kakhulu kuzimo ezibandakanya amanethiwekhi abhekana nokuphuma. Ngokutholakala kwethrafikhi ngokuzenzakalela, abasakazi bazovikeleka kunoma yiziphi izinkinga zenethiwekhi ezingalimaza.
Ukuthi I-Verizon Smartplay Ikhipha Kanjani Ikhwalithi Yokuqukethwe Engcono
Izinzuzo eziningana ze-Verizon Smartplay zifaka:
Ukubonakala kokusebenza kwesikhangiso
Ukwenza ngezifiso okuqukethwe
Umphathi Omkhulu Wemikhiqizo, Imithombo Yezindaba eVerizon Media
Ekuxoxeni ngezimfanelo zeVerizon Smartplay ngemininingwane ethe xaxa, umphathi oyisikhulu womkhiqizo weVerizon Media, Ariff Sidi bekusho lokhu, "Sivumela abasakazi kanye nabahlinzeki bokuqukethwe ukuthi bathumele ngokuqiniseka ikhwalithi enhle kakhulu kubabukeli noma ngabe bakuphi emhlabeni." Lokhu kusho ukuthi ungaqiniseka ukuthi izithameli zakho ziyohlala zithola okuhlangenwe nakho okuhle kakhulu. ”
I-Verizon Smartplay Ithuthukisa Ukufakwa Kwesikhangiso
Ngokungezelela ekubuyiseleni kabusha ithrafikhi, i-Verizon Smartplay futhi isebenza njenge-Ad Server Debug ethuthukisiwe, enikeza ukubonakala kokuphela-kokuphela kwinqubo yokufaka yesikhangiso, engaqokomisa amaphutha, ukuphuma kwesikhathi nezinkinga zokulandela umkhondo. Ngawo wonke umsebenzi wentengiso, isiphingo seseva yesikhangiso sisebenza ukuqoqa nokugcina idatha, okubandakanya izikhathi zokuphendula nezikhathi ezivela kumaseva wesikhangiso esivela eceleni, nedatha ebanzi yesikhathi seseshini engagcinwa isikhathi esingaphezu kwezinsuku eziyishumi nane.
USidi uphinde wagcizelela ukusetshenziswa kwe-ad server debug lapho esho lokho "Abasakazi nabadali bokuqukethwe banekhono lokuletha ukusakaza okwenziwe komuntu okuthandwa nguwe uqobo kuzo zonke izibukeli kepha, kuze kube manje, izingcezu zemboni ezihlukanisiwe futhi ziveza ezokukhangisa nge-OTT zenze kwaba nzima ukuthola umbono ocacile wokuthi kwenzekani phakathi nenqubo yokufakwa kwesikhangiso. I-Ad Server Debug ishintsha lokhu ngokunikeza okucacile kakhulu nokuqonda ukuthi izikhangiso zithunyelwa kanjani, zinika abahlinzeki bezinsizakalo amandla ukuze bathuthukise ikhwalithi yesipiliyoni yezigidi zababukeli emhlabeni jikelele.
I-Verizon Smartplay Nekusakazwa Kwakho Ngevidiyo
Ukuqondiswa kokuqukethwe kwe-Verizon Smartplay kuletha ukusakazwa kwevidiyo eqondene nomuntu uqobo esebenzisa ubuchwepheshe bokubonisa bokubonisa. Ngoba ama-blackout adinga abasabalalisi bokuqukethwe ukuthi bakhawulele noma yikuphi okuqukethwe okususelwa endaweni yombukeli noma kuhlobo lwedivayisi, abasakazi kufanele balethe okunye okuqukethwe esikhundleni somlayezo oshelelayo we-slate obeka engozini yokulahleka kwababukeli ukuze kugcinwe ukubandakanyeka kwezithameli. Ngaphakathi kwe-UI elula, amakhasimende akwazi ukwenza i-t0 schedule abamnyama ngaphambi kwesikhathi futhi ahlela ukusatshalaliswa kokuqukethwe okwenziwe umuntu uqobo ukuze alawule isipiliyoni sababukeli. Amakhasimende angadala ababukeli, akhe ama-Rule, abese esebenza ngale mibandela kuzimpahla ezibalulekile.
Ukwengeza ukuqhutshwa komsebenzi wokusakazwa kwefa Ngemuva kwenqubo yokulungiselela, i-Verizon Smartplay Congeting Targeting ibona indawo isibukeli, idivaysi noma imvelo ukubuka okuhlangenwe nakho okuhle kakhulu ngesimo sabo.
I-Verizon Smartplay Ne-OTT
Lapho exoxa ngezifiso ze-OTT, uSidi wathi lokho Ukwenza okwenziwe nguwe kwe-OTT kuncike kwiseva ebonakalayo ukuze kukhiqizwe uhlu lwadlalwayo oluyingqayizivele, izikhangiso nemiyalo yokudlala kabusha yawo wonke umsebenzisi. Udinga ukuthi uqiniseke ukuthi ukwazi ukwenza okuqukethwe kube okuthandwa nguwe futhi uhambisane namalungelo wokuqukethwe wendawo, kungakhathalekile ukuthi bangaki ababukeli ababukayo, ”kusho uSidi. "I-Smartplay ikuvumela ukuthi wakhe ababukeli nama -setssetthi aqinisiwe kuyo yonke impahla, kuwo wonke umbukeli acindezela ukudlala, noma kuphi emhlabeni."
Ukuze uthole ukwaziswa okwengeziwe mayelana I-Verizon Media Futhi I-Verizon Smartplay, bese ubheka www.verizonmedia.com.
Ukungena kwe-Ad Injini yokusakaza Ukusakaza Ubuchwepheshe I-Cobalt Encoder sokuqukethwe I-Graham Chapman i-Prmoted to Editor okuqukethwe okuphezulu Ott Ama-spears nama-Arrows umbhalo we-subtitling, i-Digital Nirvana, ukuqapha imidiya, i-IBC Traffic I-TVU Izinethiwekhi Verizon I-Verizon Media I-Verizon Smart Play Umlingisi wevidiyo	2019-09-27
Ngaphambilini: Umsebenzi weKhamera / Umsizi Wokukhiqiza
Olandelayo: Umbala we- "Sneaky Pete" Uqondiswe ku-DaVinci Resolve Studio